Kooxda Jwxo-shiil, oo Aan Wali Uus Xabaalkii Dr.Dolal Carabka ka Dayn, Doonayana in ay Helaan Meel ay Saaraan. – Rasaasa News
Kooxda Jwxo-shiil, oo Aan Wali Uus Xabaalkii Dr.Dolal Carabka ka Dayn, Doonayana in ay Helaan Meel ay Saaraan.
Jun 12, 2010 Doonayana in ay Helaan Meel ay Saaraan., Kooxda Jwxo-shiil, oo Aan Wali Uus Xabaalkii Dr.Dolal Carabka ka Dayn
“Libaax nin ganay iyo nin galadayba ogg” Dr. M S Dolal, dadkii dulmiga ku dilayna daah kama saara dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyo cidii ka damqanaysa midna. Axmed Nashaadna, waxaa uu ahaa saaxiibkii 11 goor oo ay damacday kooxda Jwxo-shiil in ay disho Dolal ninkii diiday.
“Likaha wali olalku kama dhaadhacsana” dadweynah Somalida Ogadeeniya qaar ka mid ayaan ilaa iyo hada fahmin khayaanda kooxda Jwxo-shiil, sida ay uga shaqaysay duminta halganka Jwxo iyo dilka diracyadii halganka qotinka u ahaa.
Waxaan jeclaan lahaa in ay maanta dadweynaha Somalida Ogadeeniya hoos u dayaan meesha uu ku sugan yahay halganka Jwxo. Wali ma isweydiiseen maxaa baabi,iyey halgankii xawliga ku socday ee uu aduunka oo dhan ka yaabay, lana qiray in uu xaq yahay in ay dagaalanto ummada Somalida Ogadeeniya.
Dadka qaarka aan wax fahamsanayn ayaa waxay yidhaahdaan dad baa ka soo horjeedsaday halganka taas ayaana keentay in uu burburo. Qaar kale ayaa waxay yidhaahdaan, Kaalinka 5aad ayaa samaystay ciidan xoog leh oo cagta mariyey ciidamadii Jwxo.
Labadan dood ee kore midna run ma aha, Jwxo waxaa jilbaha dhulka ugu dhuftay Maxamed Cumar Cismaan [Jwxo-shiil]. Waxayan arintaasi socotay mudo dheer, oo kor iyo hoosba loola hadlay, wuxuuna dabada la galay beeshiisa isaga oo yidhi “qaaraan cid bixisana waan haystaa, hoolka shirka haween ii yimaadana waan haystaa, Eritrean ciidanka way ii tabobari, cidkalen war ka maqli maayo”.
Jwxo-shiil, waxaa uu xabad uusan geedna ugu gaban ku dhuftay rag uusan gaadhi karin oo qaali ah halganka Jwxo-na qiimo ugu fadhiyey. Arintaan waa markhaati ma doon, waxayna ka mid tahay arimaha kala diray ururka Jwxo iyo ummada Somalida Ogadeeniyaba.
Waxaanse aad ula yaabanahay, ninkii shalay aad dilaysay hadii uu kaa danaystay, doorbidayna in ayna dhicin in dhalinyaro wada dhalatay ayna xabad isku dhufan, dhaqaaqoos xabashi tagay, maxaa ka dhawaajinaya Jwxo-shiil.
Bilaash xayte bogga beenta ee Ogadennet.com oo isku xili la abuuray Haleelo.co, ujeedadii loo abuurayna ay ahayd in lagu waxyeeleeyo GS-ONLF iyo UWSLF, waa yaab in wax uu ogg yahay in dakane uu ogg yahay oo uu galay adeerkii uu 2 sano ka dib uu damco in uu dusha ka saaro halgame Axmed Nashaad Xadilaah.
Wax kasta oo ay qoraan boggaga beenta uu buufiya Jwxo-shiil, xaqiiq waxaa ah in Dr. M S Dolal, uu ka qiimi badnaa nin sanooyin lagu iloobo, wuuna jiri magaciisu inta la xasuusto afarta xaraf ee halgankii ONLF, Jwxo-shiil iyo saddex nin oo kalena waa la xasuusan in ay yihiin gacantii dishay Dr. M S Dolal, wax Eebe kala kulmiyaba.
Qaaxo, Xiniin iyo Inna Mayle oo Bogga Qorahey.com, Dadweynaha Reer Qoraxeey u Saadiyey Silac
Salaadii Dilaacdaba Warsaxaafadeed, Dagaal Baa Socda, Aan Waxba ka Jirin oo Kala Socda, Siday Wax u Jiraan!